Ahoana ny fifanakalozana backlinks asa?
Ny fomba fiasa voalohany amin'ny rohy dia ny fifanakalozana bakoka miaraka amin'ireo tranokala nicheka. Ireo fifanakalozan-kevitra ireo dia matetika manaraka ireny lahatsoratra ireny tahaka ny hoe "manoro hevitra izahay", "mpanohana anay," "mpiara-miasa aminay" na zavatra mitovy amin'izany. Mihevitra ny orinasa fa raha mifandray amin'ny loharano iray izy ireo, dia tokony hampifandraisina amin'izy ireo izany loharano izany. Raha tsy izany, ny orinasa dia handefa mailaka miaraka amin'ireo hafatra mitovy. Ary koa ho fomba mahomby amin'ny famoronana rindrambaiko, dia fomba mora na mora azo hahazoana rohy mifandraika amin'izany - good cheap vps hosting. Na izany aza, ity fomba fananganana rohy ity dia nahasoa teo aloha, saingy tsy izao. Ny fitaovam-pitadiavana dia nanjary nahalala zavatra bebe kokoa ary nahatakatra fa ity karazana rohy tsy tafiditra ity dia tsy safidin'ny marina ho an'ny tranonkala, fa toy ny fomba iray amin'ny tranonkala iray hanatsarana ny toerany. Izany no nahatonga ireo fitaovam-pikarohana hanomboka hanome lanja kely ny rohy ekstatera izay nantsoina hoe resiprocal. Tato ho ato dia nanjary nandrava tanteraka ny rohy resahina, ary vitsy ny orinasa madinika very noho izy ireo. Ity karazana rohy ity dia tsy miteraka sazy goavana Google, saingy mety tsy hanome lanja ny fampielezan-kevitra fanentanana. Ny rohy mifandray dia afaka mitondra tombony amin'ny toerana. Na izany aza, ity lanjany ity dia ho toy ny teo aloha, ary latsaky ny avy amin'ny backlinks kalitao. Na izany aza dia mbola sarobidy ihany ny sandany kely. Izany no mahatonga anao tsy tokony handroaka ny rohy resahina rehetra. Ny karazana rohy toy izany dia afaka manome tombony hafa - fifamoivoizana. Azo antoka fa tsy hahazo fifamoivoizana be dia be avy amin'ny rohy resiprocal ianao, saingy mbola mety hahasoa ny orinasanao an-tserasera izany.
Ahoana no hamoronana rohy mifandray?
Tsy ny rohy rehetra dia mitovy avokoa. Ny sasany amin'izy ireo dia sarobidy kokoa noho ny hafa, arakaraka ny loharanon-tranonkala ahafahanao manova backlinks amin'ny. Tokony hifanakalo rohy amin'ireo loharanon'ny tranonkala indostrialy ianao. Ho sahiran-tsaina ho an'ny fitaovam-pitadiavana izy raha miorina amin'ny sehatra fanabeazana sy ny varotra, ohatra, boky, fa mifanakalo fifandraisana amin'ny masoivoho mpizaha tany. Na izany aza dia afaka mahita voka-kevitra iraisana amin'ny tranonkala iray izay farafaharatsiny mifandray amin'ny orinasanao ianao. Ohatra, raha namoaka lahatsoratra momba ny loha-hevitra momba ny aventure ny sampan-draharahan'ny fitsangatsanganana iray, dia hitodika ato amin'ity tranonkala ity ny rohy an-tserasera ao amin'ny Internet.
Misy rohy vitsivitsy amin'ny tranokala tsy misy dikany dia tsy manimba ny lazanao, fa raha mbola betsaka kokoa ianao, dia mety hampidi-doza ny fampidiran-dresakao amin'ny mpampiasa. Betsaka ny rohy tsy misy dikany dia mety hitovy amin'ny spam ary afaka manangana sainam-pirenena mena momba ny karazana rohy fananganana rohy izay ataonao. Amin'izay fotoana izay dia hanjavona avokoa ny fifamoivoizana rehetra amin'ny fifamoivoizana satria ho rava ireo rohy ireo.
Ny antony iray hafa tokony hahaizanao mitandrina be amin'ny hatsaràna sy ny maha-zava-dehibe ny tranonkala ifanakalozanao fifandraisana dia ny mba hahafahanao voasazy noho ny fampifandraisana ireo tranonkala mendrika. Raha hitan'i Google fa ianao no mifandray amin'ny tanjaky ny loharanom-baovaon-tsavony ambany, dia mety ho rava ny lazanao ho loharanom-baovaon'ny loharanom-baovao.Manome famantarana mampiavaka ny rafitra fisie izany, ary ny tranokalanao dia miditra ao amin'ny lisitr'ireo loharano mampiahiahy ao amin'ny aterineto.
Izany no mahatonga anao tsy mahazo antoka momba ny kalitao sy ny lazan'ny loharanon-tranonkala, fa aza miova amin'ny rindrankajy miaraka aminy. Hanampy anao hisoroka olana amin'ny hoavy izany. Manoro hevitra anao koa aho hamerina antontan'isa momba ny tranonkala mandritra ny enim-bolana farany izay ahafahanao mampiseho anao toe-java-misy amin'izao fotoana izao ao amin'ny tranonkala (fifamoivoizana, fiovàna, mpampiasa fotoana mandany amin'ny tranonkala isaky ny fitsidihana, sns.) ary ny tena zava-dehibe dia hampiseho raha misy orinasa iray no saziana fitaovam-pikarohana na tsia. Mba hahazoana ireto angona statistika ireto, azonao ampiasaina ny Semalt Web Analyzer.